The Ab Presents Nepal » गाउँपालिका कार्यालयमै वडा अध्यक्षको मदिरा पसल !
गाउँपालिका कार्यालयमै वडा अध्यक्षको मदिरा पसल !
बैतडी -: बाँयातिर नेपाली झण्डा गाडिएको छ । भवनमाथि गाउँपालिकाको साईनबोर्ड छ । एउटा कोठामा स्थानीय सरकार र अर्कोमा मदिरा पसल बेजोडले चलेको छ भन्दा पत्याउन मुश्किल पर्छ। तर, सबैलाई चकित पार्ने यो यथार्थ बैतडी जिल्लाको सिगास गाउँपालिकामा दिनानुदिन चलिरहेको छ । सिगास गाउँपालिका केन्द्र गर्जेमा खानेपानीको धारा छैन ।
सडक र बिजुली पनि पुग्न सकेको छैन । यहाँ दूध, तरकारी र फलफूल पनि पाइन्न । तर खच्चरमा ढुवानी गरेर त्यहाँ छ्याप छ्याप्ती मदिरा उपलब्ध गराइएको छ । गाउँपालिकाको यही भवनमा सिगास गाउँपालिका वडा नं. ८ का अध्यक्ष कर्णबहादुर ऐरले मदिरा पसल संचालन गर्नुभएको छ । गाउँपालिका कार्यालयको प्राङगणमा रक्सीका सिसीहरू छरपस्ट देखिन्छन् ।
यहाँ जनप्रतिनिधि, सेवाग्राही र कर्मचारी दिउँसै मदिरा सेवन गरी लठ्ठिएको अवस्थामा भेटिने गरिएको स्थानीयको जनगुनासो छ। मदिरा पसल बन्द गर्न स्थानीयबासीले पटक पटक माग गरेपनि कुनै सुनुवाई नभएको स्थानीय युवा राजेन्द्र साउदले बताउनु भयो।
गाउँ पालिकाले मदिरा नियन्त्रण र नियमन गर्न निर्देशिका जारी गरिए पनि नियन्त्रण र नियमन गर्ने निकायका जनप्रतिनिधिले नै यस्तो धन्दा गरेपछि स्थानीय दिक्क भएका छन् । यो खबर आजको गोरखापत्रमा छापिएको छ ।